အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူနဲ့ အလုပ်ကို စွဲလမ်းနေသူ (Workaholic) တို့ကြားက ကွာခြားချက် - For her Myanmar
အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူနဲ့ အလုပ်ကို စွဲလမ်းနေသူ (Workaholic) တို့ကြားက ကွာခြားချက်
ယောင်းက အလုပ်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်လား အလုပ်စွဲလမ်းနေသူတစ်ယောက်လား ?
ယောင်းတို့ရေ…အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူ (Hard Worker) နဲ့ အလုပ်ကို စွဲလမ်းနေသူ (Workaholic) ကို တော်တော်များများက တူညီတယ်ဆိုပြီး အမှတ်မှားနေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနှစ်မျိုးက လုံးဝကွဲပြားနေတာပါနော်။ ကွဲပြားပုံ ကွဲပြားနည်းတွေကို ဒီနေ့Stella ပြောပြသွားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူ (Hard Worker) ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကနေ စလိုက်ကြရအောင်…
အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူဆိုတာ ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ် အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။ ရည်မှန်းချက်မြင့်မြင့်ထားတတ်ပြီး အလုပ်အပေါ် အကောင်းမြင်တတ်သူတွေပေါ့။ ဒီလိုလူမျိုးတွေက အလုပ်ကို ကိုယ်နိုင်သလောက်ပဲလုပ်ပြီး ကုမ္မဏီအရာရှိတွေ အမြဲချီးကျူးနေရသူတွေပါ။
အလုပ်ကြိုးစားသူတွေရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေကတော့ …
(၁) အချိန်နည်းနည်းပဲ ရှိရင်တောင်မှ အဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာ အကောင်းဆုံးရလာဒ်တွေ ထွက်လာအောင် လုပ်နိုင်ခြင်း၊
(၂) ကိုယ်မနိုင်လောက်တဲ့ အလုပ်တွေပေးလာရင် ငြင်းပယ်တတ်ခြင်း၊
(၃) စီနီယာတွေဆီက ကိုယ်မသိသေးတာတွေကို သင်ယူလိုစိတ်ရှိခြင်း၊ နဲ့
(၄) အမြဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပိုကောင်းအောင် မြှင့်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Related article >>> အသက် ၃၀ အောက် အောင်မြင်နေသူအမျိုးသမီးများပြောတဲ့ အောင်မြင်ရေးလျှို့ဝှက်ချက်များ
ဒါဆို အလုပ်ကို စွဲလမ်းနေသူ (Workaholic) တွေကကော ?
အလုပ်ကို စွဲလမ်းနေသူတွေက ဘယ်အချိန်မှာ ကွန်ပျူတာကိုပိတ်ပြီး အ်ိမ်ပြန်နားရမယ်ဆိုတာ မသိကြသူတွေပါ။ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် အလုပ်ကိုပဲ စိတ်နှစ်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ ဘဝက အလုပ်ပဲဖြစ်နေတတ်တဲ့ အလွန်အကြူးတွေပေါ့။
Workaholic တွေရဲ့ ထင်ရှားတဲ့စေတာကတော့ …
(၁) အမြဲတမ်းအလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့အတွက် စိတ်တိုပြီး ရန်လိုနေတတ်ခြင်း၊
(၂) ခရီးထွက်အနားယူဖို့မပြောနဲ့ ခဏတစ်ဖြုတ်တောင် အနားမယူခြင်း၊
(၃) အိမ်မှာတောင်မှ အလုပ်အကြောင်းတွေးပြီး စိတ်ဖိစီးနေတတ်ခြင်း၊ နဲ့
(၄) အလုပ်တွေပိနေရင်တောင် အလုပ်အသစ်တွေ ပေးလာရင် မငြင်းပယ်ခြင်း စတဲ့အချက်တွေပါ။
အချုပ်အနေနဲ့ကတော့ အလုပ်ကိုစွဲလမ်းနေတဲ့သူတွေဟာ မိသားစုရေး၊ အချစ်ရေး၊ ကိုယ်စိတ်ကျန်းမာရေးတွေမှာ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါ၊ စိတ်မကျန်းမာတဲ့ရောဂါ၊ အူကင်ဆာနဲ့ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ရောဂါတွေက အလုပ်စွဲလမ်းနေသူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အလုပ်ကြိုးစားတာကောင်းပေမဲ့ ကျန်းမာရေးထိခိုက်လောက်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ရမနေနိုင်ဖြစ်တာကတော့ လုံးဝမကောင်းပါဘူး ယောင်းရေ။ ယောင်းတို့လည်း အလုပ်နဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန် ညီမျှတဲ့ဘဝတွေ ပိုင်ဆိုင်ရပါစေနော်။
ယောငျးက အလုပျကွိုးစားသူတဈယောကျလား အလုပျစှဲလမျးနသေူတဈယောကျလား ?
ယောငျးတို့ရေ…အလုပျကွိုးစားတဲ့သူ (Hard Worker) နဲ့ အလုပျကို စှဲလမျးနသေူ (Workaholic) ကို တျောတျောမြားမြားက တူညီတယျဆိုပွီး အမှတျမှားနတေတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ ဒီနှဈမြိုးက လုံးဝကှဲပွားနတောပါနျော။ ကှဲပွားပုံ ကှဲပွားနညျးတှကေို ဒီနေ့Stella ပွောပွသှားပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
အရငျဆုံး အလုပျကွိုးစားတဲ့သူ (Hard Worker) ဆိုတာ ဘယျလိုလူမြိုးလဲဆိုတာကနေ စလိုကျကွရအောငျ…
အလုပျကွိုးစားတဲ့သူဆိုတာ ဘယျလိုအခွအေနဖွေဈဖွဈ အလုပျကို အကောငျးဆုံးလုပျနိုငျတဲ့သူတှပေါ။ ရညျမှနျးခကျြမွငျ့မွငျ့ထားတတျပွီး အလုပျအပျေါ အကောငျးမွငျတတျသူတှပေေါ့။ ဒီလိုလူမြိုးတှကေ အလုပျကို ကိုယျနိုငျသလောကျပဲလုပျပွီး ကုမ်မဏီအရာရှိတှေ အမွဲခြီးကြူးနရေသူတှပေါ။
အလုပျကွိုးစားသူတှရေဲ့ ဝိသသေလက်ခဏာတှကေတော့ …
(၁) အခြိနျနညျးနညျးပဲ ရှိရငျတောငျမှ အဲ့အခြိနျလေးအတှငျးမှာ အကောငျးဆုံးရလာဒျတှေ ထှကျလာအောငျ လုပျနိုငျခွငျး၊
(၂) ကိုယျမနိုငျလောကျတဲ့ အလုပျတှပေေးလာရငျ ငွငျးပယျတတျခွငျး၊
(၃) စီနီယာတှဆေီက ကိုယျမသိသေးတာတှကေို သငျယူလိုစိတျရှိခွငျး၊ နဲ့
(၄) အမွဲကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပိုကောငျးအောငျ မွှငျ့တငျဖို့ ကွိုးစားနခွေငျး စတာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
Related article >>> အသကျ ၃၀ အောကျ အောငျမွငျနသေူအမြိုးသမီးမြားပွောတဲ့ အောငျမွငျရေးလြှို့ဝှကျခကျြမြား
ဒါဆို အလုပျကို စှဲလမျးနသေူ (Workaholic) တှကေကော ?အလုပျကို စှဲလမျးနသေူတှကေ ဘယျအခြိနျမှာ ကှနျပွူတာကိုပိတျပွီး အိမျပွနျနားရမယျဆိုတာ မသိကွသူတှပေါ။ ဘယျအခြိနျကွညျ့ကွညျ့ အလုပျကိုပဲ စိတျနှဈနတောတှရေ့မှာပါ။
သူတို့ရဲ့ ဘဝက အလုပျပဲဖွဈနတေတျတဲ့ အလှနျအကွူးတှပေေါ့။Workaholic တှရေဲ့ ထငျရှားတဲ့စတောကတော့ …
(၁) အမွဲတမျးအလုပျတှရှေုပျနတေဲ့အတှကျ စိတျတိုပွီး ရနျလိုနတေတျခွငျး၊
(၂) ခရီးထှကျအနားယူဖို့မပွောနဲ့ ခဏတဈဖွုတျတောငျ အနားမယူခွငျး၊
(၃) အိမျမှာတောငျမှ အလုပျအကွောငျးတှေးပွီး စိတျဖိစီးနတေတျခွငျး၊ နဲ့
(၄) အလုပျတှပေိနရေငျတောငျ အလုပျအသဈတှေ ပေးလာရငျ မငွငျးပယျခွငျး စတဲ့အခကျြတှပေါ။
အခြုပျအနနေဲ့ကတော့ အလုပျကိုစှဲလမျးနတေဲ့သူတှဟော မိသားစုရေး၊ အခဈြရေး၊ ကိုယျစိတျကနျြးမာရေးတှမှော ပွဿနာဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ အိပျမပြျောတဲ့ရောဂါ၊ စိတျမကနျြးမာတဲ့ရောဂါ၊ အူကငျဆာနဲ့ ကိုယျခံအားနညျးတဲ့ရောဂါတှကေ အလုပျစှဲလမျးနသေူတှမှော အဖွဈမြားပါတယျ။ အလုပျကွိုးစားတာကောငျးပမေဲ့ ကနျြးမာရေးထိခိုကျလောကျတဲ့အထိ အလုပျလုပျရမနနေိုငျဖွဈတာကတော့ လုံးဝမကောငျးပါဘူး ယောငျးရေ။ ယောငျးတို့လညျး အလုပျနဲ့ကိုယျပိုငျအခြိနျ ညီမြှတဲ့ဘဝတှေ ပိုငျဆိုငျရပါစနေျော။
Tags: Career, Company, hard work, Job, Office, work, workaholic